समाचार ट्याग गरियो "प्रवृत्ति" - उल
यस वर्ष २०२० केही हदसम्म एटिपिकल भएको तथ्यको बाबजुद पनि, उल्लेरेबाट हामी हाम्रा फ्रीरिडर र एथलीटहरूलाई उच्चतम सम्भावित गुणहरू प्रदान गर्न जारी राख्न चाहन्थ्यौं जसले खेलको अनुभव सधैं उत्तम रहन सक्छ, जे भए पनि। हामी तपाइँलाई भन्नेछौं जुन हाम्रो फ्रेडरहरूको लागि हाम्रो मनपर्ने उत्पादनहरू भएका छन्!
कुनै श doubt्का बिना हामी सबैले यो ठूलो स्वरले भन्छौं: FUCK २०२०! एक साँच्चिकै कट्टरपन्थी वर्ष ... हामी बुझ्छौं कि यो वर्ष वास्तवमै बुझ्न कठिन छ, व्याख्या गर्न गाह्रो छ र पार गर्न पनि गाह्रो छ, ... तर असम्भव छैन। हामी दृढ विश्वास गर्छौं कि हिउँका सच्चा प्रेमीहरूलाई, साहसिक कार्यका लागि अनुशासित र अनुगमन गर्नेहरूका लागि मुटुमा फ्रेन्डरहरूको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन।
यो निश्चित रूपमा सबै भन्दा राम्रो उपहार हुनेछ! दुबै पुरुष र महिला दुबैका लागि उपयुक्त सनग्लासहरू र अनुहारको समोच्चमा पूर्ण रूपले अनुकूलन गर्नको लागि सबै सम्भावित चपलता जुन खेलकुद अनुशासनले माग गर्दछ। बिभिन्न रंग संयोजन र शैलीहरू छनौट गर्नुहोस् कार्यका लागि उत्तम सामानहरू!
Uller® बाट हामी सिर्जना गर्दछौं हिउँ मास्क स्कीइ and र स्नोबोर्डिंगको लागि र फ्रीरिडरहरूको लागि। हामीलाई थाहा छ कि पहाडमा, व्यक्तित्व र शैली हाम्रा एथलीटहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पढ्न जारी राख्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईंको लागि सबैभन्दा उत्तम हो !!